November 2018 - Page 21 of 21 -
November 2, 2018 F.G 0
Waxaa uu Muran badan ka dhashay Khudbad uu ka jeediyay dalka Suudaanta Koonfureed Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,taasoo uu kaga hadlay Khilaafka Madaxda dowlad goboleedyadda iyo dowladda dhexe. Qaar ka mid ah Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in hadalka Madaxweynaha uu u muuqday Mid sii xumeynaya Khilaafka ka dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa si weyn uUga Horyimid khudbadii Madaxweyne Farmaajo ee ka dhanka aheyd maamul goboleedyada mar uu la hadlay Warbaahinta BBC-da. “Khudbad daan daansi iyo dagaal uu ka muuqdo , Madaxweynaha asigaa dhowr maalin ka hor sheegay inuu gogol u fidiyay madaxda maamul goboleedyad oo ku baaqayo in shir la isugu yimaado wixii tabasho ah uu garawsan yahay, sida dad badan tuhunsan yahay martiqaadkiisa iyo fariinta xalay uu dirayay wey kala fog yihiin”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale xusay in hadalka Madaxweynaha uusan aheyn mid ku haboon Xaalada ay Soomaaliya Maanta ku jirto. “Waxaa rabaa inaan xusuusiyo Madaxweynaha kulankii ugu dambeeyay ee Brussels ka dhacay Beesha caalamka ayaa isugu yeertay isaga iyo Madaxda Maamul goboleedyada, [Sii aqri]
Kooxo dhac Farsameeysan Ka geysan jirtay Muqdisho oo la soo bandhigay
November 1, 2018 F.G 0
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa saldhiga Degmada Hodan ku soo bandhigay koox ka kooban 10 qof oo lagu eedeeyay inay lacago sharci darro ah ka urursan jireen qoysaska barakacayaasha. Kooxdan ayaa la sheegay iney iska dhigi jireen Hay’adaha Samafalka ee bixiya lacagaha Kaashka ah, iyagoo dadka Barakacayaasha ah ka qaadi jriay sawirro iyo Foomam laga buuxiyo Magacyada qoysaskooda, kadibna ay khidmad lacageed sidaas uga qaadan jireen. Afhayeenka Gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar iyo Taliyaha Saldhiga Degmada Hodan Cabdifataax Bashiir Cali, ayaa warfidiyeenada u sheegay in aan marnaba la aqbali doonin in kooxo nuucaan oo kale ay ka howlgalaan Gobolka Banaadir, iyagoona shacabka ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan kooxaha Magaca Hey’addaha ku qaraabta. Labada masuul ayaa intaa ku daray in kooxdan ay dadka masaakiinta ah ku dhici jireen magacyo been abuur ah sharcigana la soo taagayo dhowaan.
Haweeney Loo Doortay Madaxa Maxkamadda Ugu Sareysa Itoobiya
Meaza Ashenafi Oo Ahayd Qareen Dhanka Xuquuqda Aadanaha Ayaa Loo Doortay Haweeneydii ugu horreysay oo madaxa ka noqoto maxkamadda ugu sarreyso Dowladda Federaalka ee Itoobiya. R/wasaare Abiy Axmed ayaa Soo Magacaabay ,Meaza , xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ansixiyay in ay Hoggaanka u Qabato Maxkamadda Ugu Sareyso Itoobiya. Waxaa maalimihii ugu dambeeyay dalka Itoobiyay qaar kamid ah xilalka ugu sarreya la siiyay haweenka dalkaasi. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii Sahle-Work Zewde loo doortay haweeneydii ugu horreysay oo dalka Itoobiya Madaxweyne ka noqota. Meaza ayaa sannadkii 1995-tii bilowday urur ay ku mideysan yihiin haweenka qareenada dalka Itoobiya, ka hor intaasi, waxay ahayd garsoore ka tirsan maxkamadda sare isla markaasna waxay ka qayb qaadatay qoritaankii dastuurkii cusbaa ee Itoobiya sannadihii
AKHRISO: Maxaa Looga Hadlay Shirka Golaha Wasiirada Maamulo Jubbaland?
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha Xukuumada Jubbaland. Ugu horayn Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ka warbixiyay xaalada Siyaasada wadanka waxaa uu Madaxweynahu sheegay in shirkii Dowlad Goboleedyada dalka ee dhawaan ka qabsoomay Garowe uu ahaa mid isbadal lagu sameeyay madasha iyo sidii loo qaban lahaa shirweynaha Dhuusomareeb. Siyaasada wadanka ayuu sheegay in aysan daganayn oo ay tahay in cid walba ay ka run sheegto sida xalka lagu heli karo. Wasiirka Amniga Mudane Cabdirashiid Janan ayaa faah faahin ka bixiyay howlgalada lagula dagaalamayo Al-Shabaab iyo jiidaha hore e ay ku sugan yihiin Ciidamada qalabka sida. Dhinaca kale Wasiirku wuxuu sheegay in Ciidamo gaar ah oo la sameeyay ay yihiin kuwo loogu tala galay in ay sugaan nabadgalyada Magaalada Kismaayo oo hada ah Caasimada KMG ah ee Dowlada wuxuu intaas ku daray in ay leeyahiin tababar ku filan oo iyo habdhaqan wanaagsan oo ay bulshada kula dhaqmaan. Dhinaca kale Wasaarada qorshaynta ayaa iyana soo bandhigtay hanaan loogu talagalay in lagaga hortago nabaad guurka badaha [Sii aqri]
SAWIR: Faah-faahin Ugu Dambeeyay Qarax Gaari Oo Ka Dhacay Magalada Muqdisho
Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax goor dhow ka dhacay Magaalada Muqdisho,kaasoo ahaa mid lagu xiray gaari Noociiso uu yahay Hilux oo la sheegay in uu lahaa shaqsi ka mid ah Shaqaalaha dowladda. Qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoysyada Dabka iyo Sayidka. Sidda ay xaqiijiyeen Dad goobjoogayaal ah ma jirto qof wax ku noqday,Balse Waxa uu Qaraxa Haleelay Gaariga Oo yaallay Meel Wadada dhinaceeda ah oo aysan jirin cid saarneyd. Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu Qaraxa ka dhacay, waxaana ay damiyeen gaarigii Qarxay oo gubanaayay. Si kastaba Ha ahaatee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku badan gawaaridda lagu xiro waxyaabaha Qarxa, waxaana inta badan Mas’uuliyadda Qaraxyaddaasi sheegta Ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa weerar afka ku qaaday maamul goboleedyada dalka ka jira, isagoo ku eedeeyay inay faraha kula jiraan shaqo aanay awood u laheyn. Madaxweyne Farmaajo oo la hadlayay Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Jubba ee Konfurta Sudaan ayaa sheegay in dowlad goboleedyada shaqada looga baahan yahay ay tahay in deegaanada ay mas’uulka ka yihiin gaarsiiyaan adeegyada aas aasiga ee dadka u baahan yihiin, sida waxbarasho, caafimaad, ceelal biyo loo qado, canshuuraha uruuriyaan, taasoo xusay inay tahay nidaamka Federaalka ee Adduunka ka jiro. “Maamul goboleedka waxaa u soo haray in addeeggii ay gaarsiiyaan, haddii ay tahay waxbarasho, haddii ay tahay caafimaad, in dadka ay mas’uulka u yihiin ka warqabaan iyo haday tahay ceelal inay u sameeyaan iyo canshuuraha inay uruuriyaan, anigu waxaan ka hadlayaa nidaamka federaalka ah ee dunida ka jira waa noocaas”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo. Hase ahaatee waxaa uu wax lala yaabo ku tilmaamay in Madaxda maamul goboleedyada ay faraha la soo galaan siyaasadda arrimaha dibadda oo gaar ah. “Laakiin Maamul goboleedka hadduu yiraahdo siyaasadda arrimaha dibadda oo gaar ah ayaa leeyahay, [Sii aqri]
Wararka Laga helayo Magaalada Baydhaba ee Caasimadda Mamulka K/Galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in maanta Markale diyaarad ay kasoo qaaday Magaalada Baydhabo tiro xildhibaano ah oo ka tirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed. Qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa sheegay in xildhibaanada looga yeeray Magalada Muqdisho Inkastoo aan la garanaynin sababaha loogu yeeray balse waxa la tuhmayaa in madaxda Villa Somaliya ay ka danbeyaan ayagoo Doonaya In ay dorashada ay fara geliyaan. Dhinaca kale Shalay tiro xildhibaano ah oo taageersanaa Shariif Xasan ayaa laga soo qaaday Baydhabo, waxaana ay soo gaareen Muqdisho,iyadoona qaarkood xaqiijiyay in ay Casuumaad ka heleen Madaxda Sare ee dalka. Maxamed Mursal Sheekh Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xalay hoygiisa ku qaabilay Xildhibaanadii laga soo qaaday Shalay Magaalada Baydhabo. Kulankan oo la sheegay inuu ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa looga hadlay doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed oo 17-ka bishan November ka dhaceysa magaalada Baydhabo. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Xildhibaanadan ka tirsan Koofur Galbeed ay kulamo la qaadan doonaan Mas’uuliyiinta kale ee dowladda iyo Xildhibaanada Labada aqal. [Sii aqri]